Kenya oo ka walaacsan askaraynta Alshabaab ka waddo gobollada waqooyiga - Halbeeg News
NAIROBI (HALBEEG) – Dowladda Kenya ayaa walaac ka muujisay askaraynta Alshabaab ka waddo gudaha Kenya, kaddib markii ay labadii sano ee u dambeeyey korortay tirada dadka Kenya u dhashay ee lagu qanciyey in ay kooxdaas ku biiraan.
Guddoomiyaha Gobolka Mandheera Ibraahim Cali Roobaa (Ali Roba) ayaa shalay oo Axad ahayd sheegay in heerka askaraynta Alshabaab uu marayo meel uusan weligiis gaarin, taasina ay helis ku tahay ammaanka guud ee dalka Kenya. Cali ayaa sidoo kale sheegay haddii Dowladda Kenya sida ugu dhaqsaha badan arrintan wax uga qaban weydo, in cawaaqib xumo daran laga dhaxli doono.
“Siyaasadda dowladda ee dhanka ammaanka wax isbeddel ah laguma samayn. Waan in aan horumar ku sameynaa qorshaha aan kula dagaallamayno xagjirnimada iyo argagixisada” ayuu yiri Cali oo qayb ka ahaa madaxdii lagu casumay shirka sannadlaha ah ee gobollada cimiladoodu saxare-xigeenka tahay ee dalka Kenya (ASAL).
Shirka ASAL oo sannadkan ay ka qayb galeen ergooyin tiradoodu kor u dhaafayso 1000 qof, kuwaas oo ka kala yimid 29 gobol oo Kenya ka tirsan, waxaa anjandeyaasha ugu muhiimsanaa ee diiradda lagu saaray marka laga yimaado isbedellada cimilada iyo deegaanka kamid ahaa sugidda amniga gudaha, ka hor tegista xagjirnimada iyo la dagaalanka argagixisada.
Gobollada ugu badan ee Al shabaab dadka ka qorato ayaa ah kuwa dhaca waqooyiga dalka, gaar ahaan Mandheera, Wajeer iyo gobolka Xeebta, halkaasoo ay ku dhaqan yihiin bulshooyin badankoodu haystaan diinta Islaamka.
Ciidamada Danab iyo kuwa Maraykanka oo hawlgal wadajir ah ka fuliyey Sh. Dhexe